अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने नागरिकहरुको हेरचाह गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ… « Pariwartan Khabar
२० जेठ २०७७, हेटौंडा
अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने बाहिरी मुलुकहरू जस्तै नागरिकहरुको पालनपोषण र खातामा पैसा आदि आदि जस्ता सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसदहरूलाई मन्त्रीपरिषद बैठक, सुरक्षापरिषद बैठक, प्रतिनिधि सभा बैठक, प्रदेश सभा बैठक, सर्वदलीय बैठक र स्थायी समिति बैठक आदि आदि जस्ता बैठकहरु बस्न्लाई लकडाउन लागू नहुने ? सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मात्र लकडाउन हो। सर्व साधारण नागरिकहरूले मात्र कष्ट र पिडा झेल्नुपर्ने होइन र ? अब मन्त्रीहरू र नेताहरूको अन्याय र अत्याचार अति नै भयो ।
लकडाउनमा सर्व साधारण नागरिकहरूलाई मात्र कडाइ गरेर समस्या समाधान हुन्न ? लकडाउनको कानुन र नियमहरु बनाउनेले पनि उल्लंघन गरेमा पनि कारवाही हुनुपर्छ । लकडाउनमा हत्या, हिंसा र कालोबजारी बढेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकहरु माथी लापरवाही भइरहेको जनगुनासो पनि आइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन किन ? क्वारेन्टाइनबाट भाग्नुको कारण के ? क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र क्वारेन्टाइनमा सेवा सुविधाहरु हुन आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरसले भन्दा नागरिकहरुलाई चिन्ताले बढी सताएको छ । मानिसलाई रोगले भन्दा शोक र चिन्ताले बढी गलाएको छ। लकडाउन पश्चात झनै कोरोना संक्रमित र मृत्यु संख्या बढेको देखियो । रोग निर्मुल कहिले पनि हुँदैन यसकारण अब सुरक्षित ढंगले नागरिकहरुले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने हो । लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन।
मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-०२